ပုဂံ-ညောင်ဦးတွင် ဧရာဝတီမြစ် အလှနှင့် ညနေရှုခင်းကို ဆင်စီး ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပလင်း ကမ်းသာယာ ဆင - Yangon Media Group
ပုဂံ-ညောင်ဦးတွင် ဧရာဝတီမြစ်အလှနှင့်ည နေရှုခင်းကို ဆင်စီးကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပလင်းကမ်းသာယာဆင်စခန်း စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှသိရသည်။ ပလင်းကမ်းသာယာဆင် စခန်းသည် ညောင်ဦး-ပခုက္ကူ-မြင်း ခြံလမ်းမကြီး၏ မြောက်ဘက် နှစ်ဖာလုံခန့်အကွာ ညောင်ဦးမြို့မှ ငါးမိုင်အကွာ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်း ဘေးတွင်တည်ရှိသည်။
မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက”ကျွန်တော်တို့ အခု မတ် ၂၈ ရက်မှာဆင်စခန်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဌာနအနေနဲ့ဆင်တွေကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတာကိုအများ ပြည်သူများနဲ့ကမ္ဘာ တစ်လွှားမှလက်တွေ့သိမြင်လာပြီး ပူးပေါင်းထိန်းသိမ်းလာနိုင်စေ ဖို့ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မတ် ၂ဝ ရက်တွင်ပြောသည်။ ဆင်စခန်းသို့ လာရောက် လည်ပတ်သူဧည့်သည်များအနေ ဖြင့် ဆင်များကိုကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း၊ ဆင်နဲ့ပတ်သက် သည့်အသိပညာတွေကို ဗဟုသုတ အဖြစ်လေ့လာသိရှိနိုင်ခြင်း၊ ဧရာဝတီ မြစ်တစ်လျှောက် ဧရာဝတီမြစ်၏အလှကိုခံစားရင်းဆင်စီးနိုင်ခြင်း၊ဆင်သရုပ်ဖော်တင်ပြချက်များ ဖြင့် ပုဂံသမိုင်းတွင်ဆင်များပါဝင်ခဲ့သည်ကိုလေ့လာနိုင်ခြင်း၊ ဧရာဝတီ မြစ်တစ်လျှောက်ဌာနပိုင် ဇေယျ မော်တော်ဖြင့် မြစ်အလှနှင့် ည နေခင်းအလှကိုခံစားနိုင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဆင်စခန်းဖွင့်လှစ် ရခြင်းမှာ ဆင်အခြေပြုခရီးသွား လုပ်ငန်းကိုအမှီပြု၍ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ပြည်သူများအလုပ်အကိုင်နှင့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း တိုးတက်စေရန်၊ ဆင်များနှင့်အနီး ကပ်ထိတွေ့ခွင့်ရရှိပြီး ဆင်နှင့် ပတ်သက်သောအသိပညာ ဗဟုသုတများရရှိစေပြီး၊ ဆင်များကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်စေရန်၊ ဌာနဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဆင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကဏ္ဍတွင် သာမကခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ပြည် သူ့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် သစ်လွင်သောအကြံဥာဏ် စိတ်ကူးများဖြင့် ကြံစည်ဆောင်ရွက်လာတတ်စေရန်၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပခရီးသွားများစိတ်အပန်း ဖြေအနားယူလည်ပတ်စရာနေရာ တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဆင်စခန်းကို ညောင်ဦးမှလာမည်ဆိုပါက ကားမောင်းချိန် ၁၅ မိနစ်သာကြာမည်ဖြစ်ပြီး Ebike ဖြင့်လာမည်ဆိုပါက မိနစ် ၂ဝ ခန့်သာကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြင်းခြံ/ပခုက္ကူကားလမ်းဘက်မှလာမည်ဆိုပါက ဧရာဝတီမြစ်ကူး တံတား(ပခုက္ကူ)မှ ၁ဝမိုင်ခန့်သာ ကွာဝေးပြီး ကားမောင်းချိန် ၁၅ မိနစ်သာကြာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေကြောင်းကလာမည်ဆိုပါက ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းအ ပျော်စီးသင်္ဘောများ၊ မော်တော်များဖြင့် အလွယ်တကူလာရောက်နိုင်ပြီး ညောင်ဦးမှနေ၍ ရေမိုင် ခြောက်မိုင်ခန့်သာကွာဝေးကြောင်း သိရသည်။
သရဖီသစ္စာရှင် သခင်မ မရွှေဥ နတ်ပွဲနှင့် ပန်းကောက်ပွဲ စတင်ကျင်းပ
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းနီးကပ်လာ၍ ဟာဝိုင်ယီကျွန်းသားများ သောက်ရေနှင့် ဓာတ်ဆီများ အပြေးအလွှား ၀?
မြန်မာ-ဂျပန် ပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားသော ‘ဇာတိမြေ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ဇူလိုင် ၂၇ ရက်မှ စတင်ရုံ?
အောက်စဖို့ဒ်နှင့်ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်များ ချင်းတွင်းမြစ် အတွင်း ဓာတုအဆိပ်ပါဝင်မှု??